Qiso Xanuun Badan Oo Uu Ka Sheekeeyay Wiilkii Aay Ku Dhacday Ka Bogo Oo Uducee. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 19, 2015, 3:00 am
Qisadaan waxaan ka sheekeynaaya Wiilkii Qisadan la Kulmay, wuxuuna Hadalkiisa ku Bilaabay Sidatan:- Waxaan la Degenaa Hooyadeey ilaa aan Labaatan jirsaday, Markaa ka dib ayaan ka Guuray Guriga Hooyado, markaan Guurayey waxey Hooyo igu laheyd:- Wiilkeeygiyoow ha iga Tegin oo Guriga ila joog. Hooyo Aragaaga ayaa Wehel iyo Il qawoobsi ii ah. Hooyo waan ku Jeclahay ha iga Dheeraan. Haddaba, Aniga hadalkeeda maan Dhageysan, waxaana u heystay iney iga Horjoogto wax walbo oo aan Jeclahay.
Waxaan la degay Wiilal aan Saaxibo nahay. Waxaan u Dhaxeeyay School iyo Shaqo. Markaan Waqti helo waxaan aadi jiray Filim iyo Ciyaar. Mar mar ayaan Hooyo Wici jiray si aan u Hubiyo Xaladeeda.
Maalin baa waxaa dhacday Hooyo in ay Xanuunsatay, ayna Weysay Qof Caawiya. Sey u Xanuunsaneysay ayaa Waaga ugu Bariyay. Subaxdii Xigtay ayadoo Daciif ah ayey Deriskedii ku Garaacday Derbiga. Deriskii baa Maqleen, waxeyna ugu yeereen Ambulance. Hooyo Isbitalkii ayaa la geeyay.
waxey weydiyeen Qofka la noolaa, waxeysa tiri:- Keligeey baa Noolahay. balse waxaa jira Wiil aan dhalay oo Magaalada jooga. Numberkeyga bey Weydiyeen, weyna siisay. intaas ka dib waxaa i soo Wacay Qolada Isbitaalka ayagoo leh Hooyadaa wey Xanuunsaneysaa u Imoow.
Waa Naxay oo waan Cararay. Isbitaalkii baan tagay waxaase la Kulmay Hooyo oo Hadli weysay, hadalka kaliya ee ay Dhaheysay wuxuu ahaa, Alloow maxaaan Galabsaday. Markaan Maqlay waan Ilmeeyay. Hooyo wey Eegi Weysay Indhaheyga, waxeyna igu tiri:- Sidaad ii Dayacday, Ilaah kuuma Dayaco. Waan Awoodi waayay inaan Dhaho Hooyo i Cafi, maxaa yeelay waxaan Xasuustay inaan noqday Caasi aan mudneyn in la Cafiyo.
Hooyo ayaa waxey igu tiri:- waxaase Mahad leh Allahii i kaa soo Celiyay. Xanuunka aan Xanuunsaday hadaan Adiga soo Noqoshadaada ku Helay waxba uma Arko.
Walaahi Maalintaas wixii ka Dambeeyey waxaan Go’aansaday inaan Hooyo Dacayin inta aan Noolohay. Hooyo baan Guriga Geeyay. waan u soo Adeegay, waxey i Bartay sida Cunto loo Kariyo. Hooyo baan Cuntada u Karin jiray. waxaan Bilaabay inaan Hooyo wada Aqrisano Quraanka iyo Axaadiista. ka dib Hooyo waxey ii Doortay Gabar Kheer Qabto ah, waana Guursaday, Hooyana wey nala Deganeyd. waxaan Dareemay Farxad iyo Nimcada Rabbi.
(EEBOOW WAALIDKEENA U DEMBI DHAAF, YAA RABBI).